‘Ahoana No Tsy Hiraharahantsika Ireo Kamboty Ao Nizera?’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Novambra 2013 12:28 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, Italiano, বাংলা, Español, English
Mampieritreritra ny antontanisa navoakan'ny tatitry ny UNICEF momba ny Toeran'ny Ankizy Manerantany fa ahitana kamboty 970.000 ao amin'ny zara-tanin'i Nizera amin'ny mponina mitotaly 17 tapitrisa eo ho eo. Mety miatrika fotoan-tsarotra ireo ankizy lasa kamboty ireo noho ny fahafatesan'ny rainy na ny reniny, ka anisan'izany ny fanatrehana fianarana any an-tsekoly voatery mihena sy ny fiasana tsy satry amin'ny taona mbola tanora dia tanora mba hameloman-tena na hamelomana ireo mpiray tampò hafa.
Ity lahatsary novokarin'ny UNICEF ity dia nanaraka ny tantaran'ilay tovovavy nizeriana 15 taona , izay nanao asan'ny mpivarotra an-dalambe, ka nadalain'ireo lahy antitra hovidiana nandritra izany fotoana izany. Niasa an-trano izy fony izy 12 taona, ary nandao izany trano izany noho ny fanararaotan'ilay fianakaviana azy:
Manohina ireo Nizeriana marobe ireo tantara mampalahelo momba ny kamboty, anisan'izany ny iray amin'ireo bilaogera vaovao avy ao amin'ny tetikasa sarintany ho an'i Nizera novatsian'i Rising Voices, izay nisafidy ny hiresaka momba ity lohahevitra ity. Hoy i Fatiman nanoratra tao amin'ny bilaogin'ny sarintany ho an'i Nizera: “Olana goavana ao Nizera izany hoe kamboty, izay tena manohina ny foko – satria miara-monina amin'ireo kamboty aho.
Notohizany tamin'ny famintinana ireo olana sasany izay mety hatrehan'ireo kamboty tsy manana solon-dray aman-dreny eo amin'ny fiananan'izy ireo [fr] izany:
Indrisy, hitako fa miaina anaty olana goavana maro samihafa ireo kamboty, na aiza na aiza fiarahamonina misy azy. Indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana, satria tsy mba niaina izany fitiavan-dray aman-dreny izany. Nanjary tsy manana maodely, tsy manana mpitarika na mpampianatra hiantoka ny hoaviny sy izay hiafarany izy ireo. Tsara ihany koa ny mampatsiahy fa ny fianakaviana no fitaovana voalohany hivelaran'ny ankizy. Ka ny fiarahamonina no manaraka avy eo. Fanampin'izany, tsy dia miraika firy amin'ny zava-mahazo ireo kamboty ny fiarahamonina, loza aza fa ampiasany ho amin'ny tombotsoany ireo kamboty . Vokatr'izany, tahaka ny tafiditra hatrany anatin'ireo trangam-piarahamonina maro ireo ankizy kamboty ireo, toy ny: fanaovan-jiolahy, ditran'ny fahatanorana, asa an-terivozona, fanandevozana maoderina. Ka ireo ankizy tena sahirana mafy no tena voakasika amin'izany, satria tsy manana fidiram-bola ao anatin'ny tontolo tia harena mivaingana sy tia vola.
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanomezana fanampiana sy fitsaboana ireo kamboty ao Nizera ny fikambanana ara-pivavahana. Nanampy tamin'ny fananganana foto-drafitrasa natokana hanomezana sakafo sy hialofan'ireo kamboty na ny fikambanana miozolomana na ny fikambanana katolika. Naka sary ny iray tamin'ireo trano fitaizana zaza kamboty natsangan'ny fikambanana avy ao Qatar, izay miorina eo akaikin'ny tranony i Alher:
Sarin-trano fitaizana zaza kamboty ao ambanivohitr'i Nizera, nalain'i Alher, nahazoana alalana ny sary
Fatiman namintina izany amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana matotra sy mampandini-tena [fr]:
Izany hoe, tsara ny manamarika fa ny kamboty, noho ny maha olona voahilikilika azy, dia misedra olana goavana. Nefa tena mampahonena ihany koa ny fanohanana avy amin'ny fanjakana amin'izay lafiny izay, na dia aza tokony hipaka lalina any amin'ny ny maha-olombelona antsika aza ny zavatra iainan'ireo kamboty. Ahoana no tsy horaharahantsika izy ireo manoloana ny toe-javatra iainan'ireo kamboty manerantany?
Fisaorana manokana ho an'i Laura Morris tamin'ny dikan-teny ao amin'ity lahatsoratra ity.
Dianela Eliasy Cinna
Tena mahaliana an’ahy ny fiahiana ny zaza kamboty fa anisany vesatra hoan’ny fiarah-monina izy ireny, ahiliky ny havany, ahiliky ny fiaraha-monina, sns. Nefa manana anjara toerana lehibe izy ireny raha tsy hilaza za hoe manana hevitra tsra izy ireny, manana talenta azo trandrahana, sns sady tsy azo atositosika fa olombelona ohatra ny rehetra sady mitovy zo ny rehetra.
Ny tena tiako hanampiana ny fahalalana ananako dia te hiditra lalina za fa tsy mbola ampy traik’efa amin’ny fomba hiahiana azy ireny na sia efa be ny asa sosialy nosahaniko hatramin’izay fa ny zaza kamboty tena mila jerena akaiky. Misaotra Tompoko!
04 Avrily 2018, 11:15
Tena ilaina ny fiahiana an’ireny zaza kamboty ireny izay tena ahitana sokajy maro samy hafa. Ny tanjona samy hafa izay mifandraika @ ilay sokajiny nefa tena ilaina daholo ny hanampiana azy ireny isan-tsokajiny. Merci!
04 Avrily 2018, 11:18